मेरो आँखामा लिमि उपत्यका - Jhilko
मेरो आँखामा लिमि उपत्यका
नर्जन तामाङ्ग (हुम्ला)
हुम्ला–प्राकृतिक दृष्किोणले हुम्ला जिल्ला निकै धनी छ । हरेक गाँउ विशिष्ट पहिचाँन आ–आफनै छन् । हरेक गाँउका आ– आफनै विशेषता र पहिचान रहेका छन् । संस्कृति अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि यो जिल्ला एक असल सावित हुनसक्छ । हुम्ला जिल्लाको पहिचान,चालचलन र रहनसहन,संस्कृति यहाँको प्रमुख विशेषता हो ।
हाल पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धनको लागि भौतिक सुविधा र विकासमा बामे सर्न खोज्न थालेको हुम्ला जिल्ला पदयात्री पर्यटकहरुको रोजाईमा पर्दछ । तर जिल्लामा विभिन्न स्थानहरु पर्यटन लोभ्याउने ठाँउहरु छन् । त्यसमा मेरो आँखामा लिमि भ्याली रोजाईमा किन त ?
कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्धारको रुपमा चिनिदै आएको हुम्ला जिल्ला प्रचारप्रसारको पखाईमा छ । यस जिल्लामा अथाहा पर्यटकीय सम्भावना भएपनि सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता र चासो नदिदा जिल्लाका अधिकाश पर्यटकीय स्थलमात्रै नभई जिल्लाको लिमि उपत्यका ओझेलमा छ ।
चिनको तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर कैलाश हुम्लाको उत्तरी नाम्खा–६ लिमि लाप्चाबाट सिधै दर्शन गर्न सकिन्छ । यति बयानले पुग्दैन लुकेको तिब्बतीय संस्कृतिको आकर्षण केन्द्रको रुपमा लिमि उपत्यका रहेको छ ।
लिमि जिल्लाको अन्य भु–भाग भन्दा फरक बस्ती र चालचलन छ । यो बस्ती ४ हजार भन्दा माथीको उचाईमा रहेको छ । साविकको लिमि गाँउ विकास समिति र हाल नाम्खा गाउँपालिका–६ नम्बर वडा भित्र लिमिका तिल,हल्जी,जाङ्ग गाँउ रहेका छन् । पहाडले घेरिएको समथर जमिन ।
जमिनको बिचमा बग्ने कर्णाली नदी नजिकै गुजमुज्ज परेका यी घरहरुले आखाँलाई लोभ्याउने गर्दछ । लिमि उपत्यका तिब्बतीयन संस्कृति हिसाबले निकै प्रख्यात मान्निछ् ।
तिल,जाङ्ग भन्दा ति मध्येकै हल्जी गाँउमा अर्को मुख्य आकर्षण हो , हजार वर्षभन्दा पनि पुरनो हल्जी गुम्बा । यो गुम्बा धार्मिक तथा ऐतिहाँसिक रुपमा निक महत्वपूर्ण मानिदै आएको छ ।
यस गुम्बा भित्र विभिन्न पुराना कलात्मक चित्रहरु कोरिएका छन् । दुईतले यो गुम्बामा प्रमुख मूर्ति पहिलो तलामा छ । मूर्तिकहरु निकै कलात्मक देखिन्छन । तर अधिकाश मूर्तिहरुमा धुलोको पत्र जमेको छ । सुन्दर हिमाली भुगोलको क्यान्भासको नमूना रुपमा मेरो आखाँले देखेको हो । करिब १हजार १ सय वर्ष अगाडी देखि नै यो बस्ती लुकेको सुन्दर हिमाल भित्रको स्थान हो । परम्परागत धार्मिक तथा वास्तुशास्त्रको अध्ययनको लागि पनि यो गाँउ प्रसिद्ध हुन सक्छ । हल्जी गुम्बा भित्रको अरबौ सम्पती गरगहना हुम्ला जिल्लाबाट हाल लोप भइसकेको अवस्था छ । हल्जी गुम्बाको संरक्षण गाँउले पालो लगाएर संरक्षण गरेको पाइएको छ । यो लिमि उपत्यका भित्र गाँउको सिरानमा रहेको ताल तलैया र सुन्दर हिमाल कलकल बग्ने ति खोला नाला र दुर्लभ वन्य जन्तु तथा चराचुरुङ्गीले पर्यटकलाई भुलाउने गरेको हुन्छ ।
किन लिमि उपत्यको घुम्न जाने ?
लिमी उपत्यकाको हल्जी गाउँमा एक हजार वर्ष पुरानोे हल्जी गुम्बा छ । बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र गुम्बाभित्र एक हजार वर्ष पुराना मूर्ति, बौद्ध धर्मसम्बन्धी सामान छन । दुईतले मन्दिरको पहिलो तलामा प्रमुख मूर्ति छ । यहाँका सबै मूर्ति कलात्मक छन । गुम्बा निर्माण हुुनुभन्दा पहिले नै प्रत्येक घरका एकजना पुरुषले पूजाआजा लगायतका काम गर्नुपर्ने नियम थियो ।
यो नियम अहिले यथावत छ, यो कसैले पनि तोडेका छैनन । गुम्बामा पुर्खैंदेखिको सम्पत्ति छ । जुन करौडौँ मूल्यको छ । यो धनी गुम्बामध्ये पर्छ । त्यसैले एक रोजाईमा पर्ने सक्छ । यो लिमि उपत्यकामै विश्वकै दुर्लभ र लोपोन्मुख चराहरु कालीकाण्ठे सारस,चितुरमा भारदृा चरा यही उपत्यकामा फेला परेका छन् । यो लिमि उपत्यकामा माथिल्लो क्षेत्रमा ७० प्रजातिका चरा पाइन्छन । आँखाले हेरी रहु लाग्ने विभिन्न रंगका तालहरुसगै च्याक्पालुङ, ग्याउखोला, छो, ल्याम्ज्योक र साक्य खोला जस्ता विभिन्न स्थानबाट हिमाल नजिकै देखिन्छ ।
यी स्थानमा हिमाली रातो भालु, कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, नाउर, नायन, लिंकस, चितुवा, रातो फ्याउरो, तिब्बती फ्याउरो, फ्याउमुसो, जंगली कुकुर र वनचौँरी पनि देख्न सकिन्छ । वनचौँरी, वनघोडा, रातो भालु, चितुवा, वन कुकुरहरूको त बथान नै हेर्न सकिन्छ । हिमताल पनि यहीँ हेर्न सकिने भएकोले अर्को रोजाईमा परेका हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको पालामा निर्माण गरिएको करिब एक सय ३०वर्षको पुरनो पाथी यही लिमि गाउँको हल्जीमा अझै सम्म राखिएको छ । यो पाथीमा आठ माना अटाउने गरेको वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ बताउछन् । वि.स १९४५ मा निर्माण गरिएको यो पाथीको नं ८६ छ । यो लिमि उपत्यका पुग्ना अर्कै संसार पुगेको भान हुन्छ ।
चिनको तिब्बतस्थित मानसरोवर कैलाश पर्वत हुम्लाको लिमि लाप्चाबाट सहजै अवलोकन गर्न सकिन्छ । चिनको ताक्लाकोट हुदै मानसरोवर यात्रा गर्न असहज हुने भएकोले लिमी लाप्चा नाकाबाट गर्न सर्वसाधारणका लागि यो पनि सहज हुनेदेखिन्छ । लिमि उपत्यका पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट चार दिन पैदलयात्रा पछि रमाउदै लिमी पुग्न सकिन्छ । बिच बाटोमा नजिक बस्ती र होटेल नहुदा आफैले टेन्ट खानेकुरा लगायत सामान बोक्नुपर्छ । हिउँदमा लिमी उपत्यका अवलोकन गर्न कठिन हुने भएपनि वर्षातयाममा गोठालासँग रात बिताउन पाइन्छ । ४ हजार दुरी यात्रा गर्नुपर्ने हुदा खानेकुरा, टेन्ट, वाटरफ्रुप ज्याकेट, झोला, न्यानो कपडा, टे«किङ सुज, लौरो, औषधि अनिवार्य रूपमा बोक्नुपर्छ ।
यहाँका उत्पादन लोभ्याउने खालका छनक । करिब एक सयको सिस्नोको धुलोदेखि करिब एक करोड पर्ने कोइचिनको बक्खु आकर्षक लाग्छन । लिमीको महत्व झल्काउने र अमूल््य लुगाका रूपमा कोइचिन बक्खु हो । यो बक्खु गाउँमा १५ देखि २० वटाजति छन । लिमी गाउँमै भेटिएको कोइचिन बक्खु एक हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ ।
द्वन्द्वग्रस्त यस अरबी मुलुकमा मारिनेमा यमनी र विषेश गरेर हुथी विद्रोही लडाकूहरु...
लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित...
“महिलालाई वडाध्यक्ष बनाउनु हुँदैन, यिनीहरुले काम गर्न सक्दैनन्, जान्दैनन् भनेर हिजो...